Isicisha-mlilo knapsack, efana namanye amadivayisi efanayo, ine izici wokusebenza. Le divayisi ingenye elula kunazo ngoba wayibhinca ehlombe. Uma kudingeka, idivayisi Uyoqeda umthombo umlilo.
Endabeni ka umlilo kubalulekile ukuba asebenzayo, kanye mlilo ubhaka avumele ukuba sibhekane ngokuphumelelayo umsebenzi ekuqedeni amalangabi ngokushesha. I lula olunikezwa ebukhoneni wayibhinca ehlombe noma izintambo, okuyizinto ngemuva komlilo. Idivayisi kungathatha ukushaywa.
Zokucisha ejenti e idivayisi amanzi noma i-ejenti non-nolaka. Kwasendaweni wokukucima umlilo Kwenziwa ngokusebenzisa noma emapheshana. Lokhu kwenziwa kokubili ngamanzi izixazululo amakhemikhali-non-nolaka.
ubhaka Isicisha-mlilo has a isakhiwo eziyinkimbinkimbi. Gilazi ketshezi ungaphakathi isikhwama ehlombe. Ephethe ngokuthi leli thuluzi okulula ukuyiphatha, ekhaveni has ukuwuthukulula. Lezi zici kungase kushintshwe ngaphansi umuntu ngamunye.
Idivayisi has a lot of isisindo, ngakho amabhande babe imicamelo ukuthambisa. Ukuvimbela imiphumela emibi evela contact isikhathi eside nge isitsha has zifudumele isilonda. Liquid ukuhoxiswa inhlukano atomizer - futha. Nakuba isisindo okusezingeni eliphezulu zedivayisi, kodwa kulungile ukuyisebenzisa, njengoba sasisebenza wenziwe polypropylene.
Knapsack ihlathi mlilo has a atomizer olwenza 1 imodi wokusebenza:
icwecwe jet ngamanzi;
Ukuze mode yokugcina okufakiwe umlomo wombhobho ekhethekile. Ngaphezu imishini obusebenzayo, kukhona amandla ngoba amanzi okuphuza, ngoba idivayisi isetshenziswa ngaphandle. Abakhiqizi ubhaka nezicimo ukudala imikhiqizo ngezinto ezahlukene. Futhi ingahluka izakhiwo ezithile.
Ubhaka mlilo ukusebenza ngempumelelo, udinga ukukhetha idivayisi izici ezifanele. Ngenxa ukusebenza okuhle kuyoba umlilo ngokushesha. Kusukela inani amalitha ijubane idivayisi kuncike. Idivayisi 3 l / imiz ubhekana imisebenzi yayo esiphuthumayo.
Kufanele sinake inani umthamo ukusebenza. I emikhulu inombolo, umlilo ngcono siyocinywa. Kodwa njengoba divayisi isetshenziselwa uma ngemuva, akudingekile ukuba ukhethe ithuluzi esindayo. Yanele ukuthenga leso mlilo ugodo ubhaka 25 amalitha.
Kuyadingeka ukuba acabangele ubude insika amanzi. On ohlangothini mpo kungcono ukukhetha idivayisi ne Inkomba kwamamitha ayisithupha, kanti ovundlile - 12 metres. Amadivayisi esikalini futhi ubukhulu umthamo ukusebenza. Kufanele ukhethe amadivayisi ngezimiso 370h190h430 mm (ububanzi, ukujula ukuphakama). Le kit kufanele kube isikhwama ehlombe futha wokubacindezela.
Thola ekuqaleni ukuvumela ubhaka mlilo. kudivayisi Photo ebonisa ukuthi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kodwa idivayisi ngamunye kungaba on isicelo imingcele. Ziyakwazi kakhulu ezimweni lapho kudingeka ukuqeda phansi imililo, futhi ukufinyelela ubuchwepheshe akuyona.
Amathuluzi asetshenziswa hhayi kuphela enkonzweni umlilo, kodwa futhi izindlu zasemaphandleni yangasese. angeke Foam mlilo ingasetshenziswa kulezo zimo lapho kuqubuka umlilo ngenxa short circuit. amadivaysi Powder zisetshenziswa cishe yonke indawo, kodwa kungafaki eqeda izinsimbi alikhali kanye nezinye izinto, okuyinto niyishise isimo-mpilo-free.
Indlela abaningi baba ubhaka mlilo ku abezicishamlilo? Lokhu kulinganisela kunqunywa ifomula ekhethekile. Isibalo imishini okufanele kube kusayithi kunqunywa iziqondiso ezingokomthetho.
Ubhaka mlilo kusukela ethandwa kakhulu kuba "RP 18 Ermak". Umthamo ivolumu 18 amalitha, futhi umkhiqizo - 2.25 l / imiz. Intengo cishe zedivayisi - ruble 3100.
Leli lungiselelo ngempumelelo wenza zokucisha ebusweni imililo. Plus, eziningi mlilo:
Ungafaka izindlela ezahlukene.
Ukusebenzisa futha uhlangothi, amanzi yanikezwa ukunyakaza esangweni emuva naphambili. Ukuze ngokushesha ukucima, kubalulekile ukusebenzisa isenzo icwecwe futhi sishaye ezimweni lapho kuyadingeka. Ngokwesibonelo, ubude ukugeleza uketshezi ecaleni lokuqala ilingana 8.9 m, kanye jet spray kuyinto 3.5 m. Ngakho-ke, lokhu kwenza kwasendaweni kunqunywa kungenzeka umlilo yokusondela umthombo. Nge nokuhlolwa efanele isimo bese usebenzisa imodi kwesokudla ivolumu kwanele ukuqeda umthombo umlilo.
Ngakho, le divayisi, noma compact, kodwa has eziningi eziwusizo kuqhathaniswa nezinye nezicimo umlilo. Uma kwakukhona indawo umlilo suburban, akufanele ukugqoka ibhakede, ngoba ungasebenzisa knapsack mlilo.
Kuyadingeka ukuthi ihlole idivayisi ukusebenza. Uma izinkinga, kufanele ukuqeda isici kulo, kungenjalo ithuluzi ngeke bakwazi ukwenza imisebenzi yaso. I mlilo kumele zitholakale endaweni ekhethekileko ngaye.
Akukhona njalo amanzi kungenzeka eduze komlilo, futhi idivayisi ehlombe Ukusekela kuyinto elula ukusebenzisa futhi nganoma isiphi isikhathi kungasetshenziswa. Kuyinto kudingekile kuphela ukulawula izimo wesitoreji zedivayisi, hhayi ukuze adalule ke okushisa aphakeme nezinye izinto ezingezinhle ngaye.
Yethenisi - kungcono osekwadlula esabekayo
Impilo kanye namanzi. Izinga amanzi okuphuza
State Assembly (Il Tumen) we Sakha Republic (Yakutia): usihlalo, iphini
Kala - singakanani? uhlelo ntathu kanye nemikhakha main
Ukubhala ukuthengisa imibhalo noma Ukukhipha 'ukuthenga ukumelana'